I-Wholesale 59”x24”x14” Foldable Hitch Mount Cargo Basket for Trailer With High Side kanye 360 ​​LBS Umthamo abakhiqizi nabahlinzeki |Izesekeli zomholi
59”x24”x14” Foldable Hitch Mount Cargo Basket for Trailer with High Side kanye 360 ​​LBS Capacity
Kungakhathaliseki ukuthi uzokhempa noma uthatha uhambo lomgwaqo, ukwandisa umthamo wakho wokuphatha cishe kudingekile, futhi lo bhasikidi wemithwalo ogingqiwe we-Leader Accessories ungomunye wabathwali bempahla abasebenzayo nabasebenza kahle kakhulu abafaka imithwalo ukuze ukhuphule umthamo wokuthwala imoto yakho futhi. kulula futhi kulula ukuyinakekela nokuyihlanza ngenxa yesitezi sayo esiqinile se-mesh, ngaphandle kwalokho, ingaphinda igoqwe lapho ingasetshenziswa futhi ihlanganiswe ngokuqinile nezikhonkwane zokukhiya.
Into NO.: 102357
Ihlala isikhathi eside, iyagoqeka
● Umthamo ohloniphekile: hitch ubhasikidi wezimpahla onesisindo somthamo omkhulu ongu-360 LBS endaweni engu-59”(L) x 24”(W)x 14''(H) yesikhulumi.Ama-rails asemaceleni aphezulu avumela ukuthi lo bhasikidi ubekwe ngokuphepha phakathi nohambo ngaphandle kokukhathazeka ngamaqhubu omgwaqo.
● Ishubhu esamukelayo esigoqayo: i-shank egoqayo ivumela lo bhasikidi wezimpahla ezihitshisiwe ukuthi utsheke uma ungasetshenziswa, ulungele umamukeli wempahla ogijinyiswayo ongu-2.
● Isakhiwo esizungezayo esiyingqayizivele: isakhiwo esizungezayo esiklanyelwe esisha nesisha sigwema ngempumelelo ukugqwala okubangelwa ukunwaya ijazi leshubhu.
● I-Anti-rattle: isizinzisi siklanyelwe ukuqeda umsindo oshisayo, ukuntengantenga, nokunyakaziswa kwe-hitch yabathwali bempahla, izamukeli zama-trailer, ama-rack amabhayisikili, njll.
● Insimbi ewugqinsi: ukwakhiwa kwezingcezu ezimbili kuhlanganisa ukuqeda kwejazi elimnyama eliqinile ukumelana nokuklwebheka nokugqwala, kuyilapho ubhasikidi wemithwalo we-mesh usiza ukumumatha inhlobonhlobo yezimpahla, elungele ukukhempa, uhambo lomgwaqo, njll.
Ukuvunyelwa okude kakhulu kungama-intshi angu-9 phakathi kwesikhungo sembobo yeshubhu (noma isikhungo sembobo somamukeli) kanye nangaphezulu kubhasikidi lapho usongwa.
● Sicela ulinganise ibanga ukuze uqinisekise ukuthi likhona ikhono lokusula ubhasikidi wemithwalo ogoqiwe ukuze uthwale ithayi eliyisipele emotweni yakho.
● Lo bhasikidi wezimpahla awuhloselwe ukuthwala abantu.
● Ungaphathi impahla ebanzi noma ejulile kunenkampani yenethiwekhi.
● Ungaziphathi izinto ezivuthayo.
● Ungavumeli igesi yokukhipha umoya iphephezele kubhasikidi.
● Ungeqi umthamo wokudonsa otuswe umenzi wemoto yakho.
● Ungeqi umkhawulo wesisindo esiwumkhawulo wamaphawundi angama-360.
● Ungabeki sonke isisindo ekugcineni.
Okwedlule: I-Reathable Extra Guard 5 Izendlalelo Ikhava Yemoto YeSUV Engangeni Manzi Ifike Ku-195” 240”
Olandelayo: Amabhayisikili angu-2 namabhayisikili angu-4 Isitayela Seplathifomu Esigoqekayo Hitch Mount Bike Rack for Cars SUV